၁၂ နှစ်မြောက် သားမွေးနေ့နှင့် ၁၀ ကြိမ်မြောက် ၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲ ~ Nge Naing
Monday, July 25, 2011 Nge Naing 21 comments
ဒီနှစ် သားရဲ့ ၁၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ 24/7/11 မှာ သာသနာ့ဓဇ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့ ၁၀ ကြိမ်မြောက် ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ ကျင်းပတဲ့နေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် သားအသက် ၁၂ နှစ်တိတိ ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သံဃာတော်အတွက် ၀ါဆို သင်္ကန်းတစုံ ကပ်ပေးပြီး ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲကို ကြွရောက်လာကြသူတွေအတွက် ကလေးလူကြီး ဘယ်သူမဆို ကြိုက်တဲ့ ပီဇာကို လှူပေးလိုက်ပါတယ်။ ညဘက် သူ့ကိုမွေးတဲ့ ထိုင်းစံတော်ချိန် 7:13 မိနှစ်မှာတော့ ဘုရားဝတ်ပြုပြီး ဘုရားကို ပန်း၊ သက်စေ့ဆီမီးနဲ့ ရေချမ်းကပ်ကာ ဘုရားတရားသံဃာ ဂုဏ်တော်တွေ၊ ၂၄ပစ္စည်းပဌာန်းအတိုနဲ့ အခု ဆိုက်ဘားက C-Box အပေါ်နဲ့ အောက်ကို ညှပ်ထားတဲ့ပို့စ် မကြာသေးခင်ကမှ သင်ပေးခဲ့တဲ့ မေတ္တာပို့ဘုရားရှိခိုးကို ရွတ်ဆိုစေပါတယ်။
(၁၅) ကိုကြည်ဝေ၊ မရူပါ-----------------------မုံလာဥပိုးတီသနပ် (အသက်သတ်လွတ)်
(၂၁) မောင်တိုးနန္ဒဦး (12 နှစ် ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်အမှတ်)------ပီဇာ (Pizza)
လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ နှစ်နှစ်က သားကိုမွေးတဲ့ ညမှာ ကျွန်မ သူ့ကို မတွေ့ရဘဲ ထိုင်းစံတော်ချိန်နဲ့၂၅ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီခွဲ ဆရာဝန် Round လှည့်တဲ့အချိန်မှာမှ သားမျက်နှာကို မြင်ခွင့်ရပါတယ်။ သူ့ကိုမွေးတေ့ ဗိုက်ခွဲမွေးရတဲ့အတွက် မွေးတဲ့ညမှာ ကျွန်မ ဘာမှ သတိမရ၊ သားကိုလည်း မမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက် မွေးတဲ့နေ့ ၂၄ ရက်နေ့ညထက် သားမျက်နှာကို ပထမဦးဆုံး မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့နေ့ ၂၅ ရက်နေ့က ကျွန်မကို အမှတ်တရ ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ သားမွေးနေ့ အတွေ့အကြုံဆောင်းပါးလေးကိုတော့ အနက်ဖြန်အားတဲ့အချိန်မှ ဖြည့်ရေးဖုိ့ ရှိပါတယ်။ အခုတော့ ဓါတ်ပုံတွေပဲ အရင်တင်လိုက်ပါတယ်။
ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှ မြတ်သောအလှူ တရားဟောနေစဉ်
တရားနာ ပရိတ်သတ်များနဲ့ အတူ တရားနာစဉ်
တရားနာပြီး သင်္ကန်းကပ်ရန် စောင့်နေစဉ်
ညနေဘက်အိမ်က ဘုရားမှာ ပန်း၊ သက်စေ့ဆီမီးနှင့် ရေချမ်း ကပ်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်
ဘုရားမှာ ကပ်သော ပန်း၊ ရေချမ်းနှင့် သက်စေ့ဆီမီး
သားလေး ဘာသာရေးအသိ ကြွယ်ဝပြီး အများအကျိုးဆောင်တဲ့ လူတော်လူကောင်း သူတော်ကောင်းလေး ဖြစ်ပါစေ။
Posted in: Australian society and environment,ဘာသာရေး,သားသား,မွေးနေ့ဆုတောင်း
July 25, 2011 at 1:32 PM Reply
Happy Birthday ပါသားသား။
Happy birthday, dear Toe Nanda,
သားလေး မောင်တိုးက ဖခင် ကိုကျော်နိုင် နဲ့ မိခင် မငယ်နိုင်ရဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးမှု၊ ငါးပါးသီလကို လိုက်နာကျင့်သုံးမှု၊ အမှားအမှန် ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်မှု၊ လောကကို အကျိုးပြုနိုင်အောင် အားထုတ်မှု ဆိုတဲ့ အမွေတွေကို လက်ကမ်းယူနိုင်ပါစေ လို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်။
July 25, 2011 at 4:32 PM Reply
အောင်မြင် ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရပါစေကွာ..
အစ်ကိုတို့ထက် ပိုတော် ပိုတတ်တဲ့ ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို အကျိုးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ပါစေကွာ..
ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို မမေ့မပျောက်သူ၊ ပရိသတ်အလယ်မှာ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လို့ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဂုဏ်ယူနိုင်သူ ဖြစ်ပါစေကွာ..
အစ်မငယ်နိုင်လို တသက်တာ ကာလပတ်လုံး အမှန်တရားဘက်၊ အဖိနှိပ်ခံရသူတွေဘက်က ရပ်တည်နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေကွာ..
July 25, 2011 at 7:05 PM Reply
July 25, 2011 at 9:33 PM Reply
လူတော်လူကောင်း ဖြစ်စေကြောင်း မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်
နန်း ရှင် says:
July 25, 2011 at 9:41 PM Reply
happy birthday par thar thar yay.
July 26, 2011 at 12:04 AM Reply
များစွာဖေဖေ၊မေမေတို့နှင့်အတူ ပျော်ရွင်ချမ်မြေ့စွာ ဘဝ
July 26, 2011 at 1:08 PM Reply
သားအကြောင်းရေးတဲ့ မငယ်နိုင်ရဲ့ ပို့စ်တွေ ဖတ်ရလို့ သိနေခဲ့ရပါတယ်။ အခုတွေ့ရတဲ့ ဓါတ်ပုံမှာ တော်တော်အရပ်ရှည်ရှည်ပဲနော်။
July 26, 2011 at 5:10 PM Reply
Happy birthday ပါ၊ ဖိုးခွါး။
ဘဝခရီးကို အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
July 27, 2011 at 4:05 AM Reply
ကိုအောင်းကျော်နိုင်သားက ဘာလို. တိုးနန္ဒဖြစ်ရတာလဲ.. သူ.အဖေက ကိုအောင်းကျော်နိုင် မဟုတ်ဘူးလား။ နေတိုးနဲ.တော. ဓာတ်ပုံအတူတွဲရိုက်တာတွေ.ဖူးတယ် သားအဖ ကျနေတာပဲ။
July 27, 2011 at 8:45 AM Reply
July 27, 2011 at 9:54 AM Reply
July 27, 2011 at 10:25 AM Reply
ဟာဂျီအဗ္ဗဒူလ်မိုဟာမက်ဒီနစ်ဘိုင် (July 27, 2011 4:05 AM)
လူကောင်းသူကောင်းတွေက လူလိုသူလို မင်္ဂလာစကားရေးနေတဲ့နေရာမှာ မင်းက ခွေးစကားဝင်ေ၇းနေ၇သလား
ခွေးစကားတွေကို လူတွေမင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်၊ လူတွေမင်္ဂလာယူနေတဲ့နေရာပါမရှောင် ဝင်ရေးပီးမိုက်ရိုင်းနေလိုက်တာ
July 27, 2011 at 2:15 PM Reply
သားအတွက် လာဆုတောင်းပေးသူတွေ ဖြစ်တဲ့ Anonymous (July 25, 2011 1:32 PM), Sein Lay, ဂရမ်မာ ကြာရွက်၊ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်၊ Min, သားထူး၊ နန်းရှင်၊ ညိမ်းနိုင်၊ ကောင်းမွန်ဝင်း၊ မန်းဘခိုင်တို့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆုတောင်းပေးတဲ့အတိုင်း ပြည့်ဝပါစေ။
ကောင်းမွန်ဝင်း - ဟုတ်တယ် သားကအရပ်သိပ်ရှည်တယ်။ သူ့ကို အားလုံးက ၁၄-၁၅ နှစ်လောက် ထင်ကြတယ်။ အရင်နှစ်ကပို့စ် ရင်သွေးတခု ဖြစ်တည်မှုက ဓါတ်ပုံတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် အသက်က ၁၁ နှစ်နဲ့ သူကကျွန်မထက် ပိုရှည်နေပြီ။ အခုအရင်နှစ်ကထက် ပိုရှည်တယ်။ ငါးပေ ၁၁ လက်မရိတဲ့ သူ့အဖေကို မီဖို့ တလက်မကျော်ကျော်ခန့်ပဲ လိုတော့တယ်။
သားမွေးနေ့ ပြီးတာနဲ့ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲ အလုပ်များပြီး ကျွန်မ ဒီနေ့ဆွမ်းလှည့်ကျလို့ မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့မှာ ဆွမ်းချက်ဖို့အတွက် ဈေးဝယ်၊ ချက်ပြုတ် ဆွမ်းပွဲပြင် လုပ်ရင်းနဲ့ အလုပ်များနေလို့ ဘလော့ဂ်ကို ပြန်မကြည့်ဖြစ်ရာကနေ အားတဲ့အချိန်မှ ဘလော့ဂ်ထဲ ၀င်လာတော့ သူများ ကုသိုလ်ရေးနဲ့ အလုပ်များနေချိန်မှာ အားအားလျားလျား အကုသိုလ် လာပွားထားတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကလည်း ရှိသေးပါလားလို့ တရားရမိတယ်။ ၀ါတွင်းကာလမှာ ကိုယ်တိုင် ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ရင်လည်း ထားပါတော့ သူများကုသိုလ်လုပ်တာကို သာဓုခေါ်ကာ ကုသိုလ်ယူပြီး အကုသိုလ်ကိုတော့ ရှောင်သင့်တာပေါ့။ အခုတော့ မရှောင်နိုင်တဲ့အပြင် ၀ါတွင်းမှာတောင် သူတပါးကို အဘိဇ္ဇာမပွား၊ အကုသိုလ် မပွားရရင် မနေနိုင်တဲ့ ၀ဋ်ကျွေးက တော်တော်လေးကို မသေးတဲ့ ၀ဋ်ကျွေးပါလားလို့ပဲ နားလည်လိုက်ပြီး ဂရုဏာ သက်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မဘက်က ဂရုဏာသင့်ပြီး ၀င်ပြောကြသူအားလုံးကို သူတို့လာပွားတဲ့ အကုသိုလ်ကို မယူကြဘဲ ကျွန်မအပေါ် ပွားတဲ့ ဂရုဏာကို ကုသိုလ်ပါရမီ နည်းပါးလှတဲ့ သူတွေကိုပဲ ပြန်ပွားပေးလိုက်ပါလို့ အကြောင်းပြန်ပါရစေ။ စာလာဖတ်သူ အားလုံးကို နောက်ကျမှ အကြောင်းပြန်ရတာ ဆောရီးပါ။ ၀ါတွင်းကာလမှာ အကုသလိုလ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
July 27, 2011 at 4:08 PM Reply
mg (မောင်) ဆိုတဲ့ ရုရှရောက်စစ်ဗိုလ်က တယောက်ထဲ ကွန်မင့်တွေ အများကြီး အားအားယားယား ရေးပြီး မငယ်နိုင်ကို နှောင့်ယှက်နေတုန်းပဲကိုး။ တော်ရုံတန်ရုံလောက်ဆိုရင် မျက်နှာလွှဲနေလို့ ဖြစ်ပေမယ့် အကုသိုလ်ကောင် mg (မောင်) က သာရေးရော၊ နာရေးပါမရှောင် အကုသိုလ်အလုပ်တွေ လာလာလုပ်နေတာက တရားလွန်လွန်းနေလို့ တော်တည့်မှန်ကန်သူတွေက ရုရှရောက်စစ်ဗိုလ် mg (မောင်) ကို ဆုံးမနေရတာပေါ့။ အသားလွတ် အစော်ကားခံနေရတဲ့ မငယ်နိုင်ဘက်က ဝင်ပြောပေးနေတဲ့ တခြားလူတွေတော့ မသိဘူး၊ ကျနော်ကတော့ အရင့်အမာ မဟုတ်လို့ မငယ်နိုင် အကြံပေးသလို အကုသိုလ်ကောင် mg (မောင်) ကို ဂရုဏာပွားနိုင်လောက်တဲ့အထိတော့ ပါရမီခံ မကောင်းတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
အကုသိုလ်ကောင် mg (မောင်) က အခုလို မငယ်နိုင် သားလေးရဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာ အချိန်မှာမှ အမင်္ဂလာကွန်မင့်တွေ ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ မငယ်နိုင်ရဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာ အချိန်မှာ တင်တဲ့ အောက်က သာရေးပို့စ် မှာလဲ အမင်္ဂလာကွန်မင့်တွေ ရေးခဲ့တာပါ။
ရုရှရောက်စစ်ဗိုလ် mg (မောင်) က သာရေးတင်မက နာရေးကိုပါ မရှောင်နိုင်ပဲ ဝင်ရေးတဲ့အထိ အောက်တန်းကျနေတာပါ။ အောက်က နာရေးပို့စ်တွေမှာ အမင်္ဂလာကွန်မင့်တွေ ရေးသွားတာလဲ အကုသိုလ်ကောင် mg (မောင်) ပါပဲ။
ရုရှရောက်စစ်ဗိုလ် mg လို ငါးခုံးမတွေကြောင့် နဂိုကတဲက နာမည်ပျက်နေတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ပိုပြီးတော့ ရေစုန်မျောတော့တာပေါ့။
July 27, 2011 at 4:09 PM Reply
ရုရှရောက်စစ်ဗိုလ် mg (မောင်) က မငယ်နိုင်ရဲ့ နာရေးပို့စ်တခုမှာ ရေးထားတဲ့ အမင်္ဂလာကွန်မင့် နမူနာတခုလောက် ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ အကုသိုလ်ကောင် mg (မောင်) က ဘယ်လောက် လူစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ် ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။
မှာ အကုသိုလ်ကောင် mg (မောင်) ရေးထားတဲ့ အမင်္ဂလာကွန်မင့်ပါ။
July 27, 2011 at 4:43 PM Reply
စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။ ကျောင်းသားဘဝမှာ ပညာချွန်သူ ဖြစ်ပါစေ။ လူကြီးဘဝမှာ ကိုယ့်အလုပ်မှာ ထူးချွန်သူ ဖြစ်ပါစေ။
ဇာတိ ဆိုတာ မဖျောက်သင့်ဘူး ဆိုတာကို နားလည်ကျင့်သုံးနိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ။ မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက် အုတ်တချပ်သဲတပွင့် အဖြစ် ပါဝင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ။
ဦးဦးတို့မြန်မာပြည်မှာ မတရား ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ အပြည့်အဝ ရရှိရေးအတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ပြည်သူ့ဘက်သား ဖွားဖွားစု နဲ့ ဖိုးဖိုး၊ ဖွားဖွား၊ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ ကိုကို၊ မမတွေလို တသက်တာလုံး မယိမ်းမယိုင်ပဲ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ။
ဦးဦး ဆုတောင်းပေးတာတွေ အားလုံး ပြည့်ဝပါစေ။
July 27, 2011 at 8:42 PM Reply
အောင်မြင်သူအဖြစ် ပျော်စရာဘဝခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ.. မတရားမှုတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်တဲ့ အန်တီငယ်နိုင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်လို ဖြစ်လာအောင် လေ့ကျင့်ယူနိုင်ပါစေ..
July 29, 2011 at 1:47 AM Reply
I wish youahappy, healthy and enjoyable life.